स्वतन्त्र दलित आन्दोलनको उठान - मालागिरी समाचार
Home›विचार/विश्‍लेषण›स्वतन्त्र दलित आन्दोलनको उठान
०४७ मंसिरमा चितवनको माडीमा नेकपा (एकता केन्द्र) को महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनमा गठन भएको पार्टीको हाइकमाण्ड (पोलिटब्यूरो) सदस्यमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नारायणकाजी श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराईसँगै एकजना दलित नेता पनि थिए, रूपलाल विश्वकर्मा ‘माने’। पछि उक्त पार्टी २०५१ सालमा विभाजित हुन पुग्यो र नेकपा (माओवादी) को जन्मसँगै प्रचण्ड उक्त पार्टीको महासचिव भए।
त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता रूपलाल पनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गरी ‘दलित श्रमिक मोर्चा’ नामक पार्टी निर्माण गर्न पुगे । जुन पार्टीले २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक रूपमा भाग लिएको थियो । त्यो नै दलित समुदायको राजनीतिक मुद्दाका निम्ति स्थापित पहिलो राजनीतिक संगठन (पार्टी) थियो र दलितको नेतृत्व पनि । तर रूपलालको असामयिक निधनपछि पार्टी सांगठनिकरूपमा अघि बढ्न सकेन। त्यस पार्टीमा लागेकाहरू अन्य पार्टीतर्फ लागे, कोही राजनीतिभन्दा टाढा पुगे ।
०५५/५६ सालतिर सिरहा जिल्लाको लाहानमा सिनो काण्ड भयो। मधेसमा गाईवस्तुको मृत्यु भए चमार (दलित) जातिले फ्याँक्नुपर्ने कुप्रथाको विरुद्धमा भएको त्यो सिनो बहिस्कार आन्दोलनबाट स्थापित केही व्यक्ति मिलेर दलित जनजाति पार्टी निर्माण गरियो ।
दलित मुद्दामा राजनीतिक समाधान खोज्न गठित दोस्रो राजनीतिक संगठन त्यही पार्टी थियो । एमालेका विश्वेन्द्र पासवान, माओवादी जनयुद्धमा लागेका नगेन्द्रप्रसाद पासवान (ज्वाला सिंह—जो पछि फेरि माओवादी छोडी मधेसी सशस्त्र विद्रोहमा लागे) डिल्ले मिजारलगायतका व्यक्ति सम्मिलित उक्त पार्टीले पहिलो संविधानसभामा एक सिट र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई सिट जित्न सफल भयो । न्यून संख्यामा संविधानसभामा उपस्थित भए पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको दलित जनजाति पार्टी पछिल्लो संसदीय र प्रदेशसभामा भने थ्रेसहोल्डका कारण राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।
यी माथि उल्लिखित दुई पार्टीको दलित मुक्ति आन्दोलन र प्रयासबाहेक विगतदेखि हालसम्म कछुवा गतिमा आन्दोलन गर्न दुई पक्ष छन् । एक– विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन। दुई दलित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरू ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एकल खस आर्य जातीय पार्टी हुन् । भलै मधेसका दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी क्षेत्रीय रूपमा नै भए पनि स्वतन्त्र छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र, जाति, वर्गको पक्षमा बोल्दा कसैको नियन्त्रणमा बोल्नु पर्दैन ।
मूल धारका भनिएका तीनवटै पार्टीका अध्यक्ष, सभापति र पदाधिकारी पार्टी स्थापनाकालदेखि एउटै जातिको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । ती पार्टीका नेता (दलित, जनजाति, महिला मधेसी)ले संसद्मा र बाहिर आफ्नो विवेकको अडान राख्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खसआर्य नेतृत्व नै अघि आउने हुन्छ ।
एकदुई जातिका मन्त्री, सांसद, सरकारी जागिर, उच्च शिक्षा, गैरसरकारी संस्थामा पहुँच मात्रै खोज्ने आन्दोलन अब जरुरी छैन । मधेसका ८० प्रतिशत दलित समुदाय नागरिकताविहीन, अशिक्षित र भूमिहीन छन् । पुस्तौंदेखि नागरिकविहीन समुदायको हक कसले खोज्ने ?
दलित भ्रातृ संगठनले मुक्ति आन्दोलन गर्दा विभिन्न पद, लोभ, स्वार्थ देखाएर भाँड्न लगाउनु र चाणक्य नीति ‘फुटाऊ र राज गर’ मा आजसम्म सफल देखिन्छ । दलित मुक्ति आन्दोलन स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक र वैधानिक संगठन र नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्ने स्पष्ट छ ।
उदाहरणका निम्ति भारतकै दलित आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ । डा. भीमराव अम्बेडकर, नेता काशी राम र मायावतीसम्मले स्वतन्त्र राजनीतिक पार्टीमार्फत संघर्ष गरे । मायावती त भारतकै ठूलो प्रान्त उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा तीनतीनपटकसम्म निर्वाचित भइन् र दलितलगायतका उत्पीडित वर्गको हितमा ऐतिहासिक काम गरिन् । हाम्रो देशमा दलित समुदाको अगुवा भने माक्र्सवाद, लेनिनवादमा पोख्त भए र डा. अम्बेडकरको महान् मुक्ति मार्ग अध्ययन गर्न चाहेनन् । विडम्बना उनका सिद्धान्तबमोजिम दलित आन्दोलन अघि नबढ्दा सफलता मिल्न सकेन ।
दलित बुद्धिजीवी, शिक्षित युवा र मुक्तिको चाहना राख्ने समस्त दलित, गैरदलित समुदायले यस आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने दायित्व आएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लक्षित गरी २०४८ सालताका भनेका थिए, ‘पार्टी र सरकार समावेशी भएन भने एक दिन पार्टीसँग साइनबोर्ड मात्रै बाँकी रहनेछ ।’ यसरी पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपश्चात् नै समावेशीकरणको मुद्दा उठे पनि त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक दबाउने काम भएकै हुन् । मुलुक द्वन्द्वतर्फ नधेकेल्ने हो, स्थायी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि चाहने हो भने दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण र जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहारको कडाइका साथ उन्मूलन गर्न जरुरी छ ।
दलित समुदायको जनसंख्या कुल संख्याको १३.१२ प्रतिशत छ । भर्खर मात्रै सम्पन्न व्यवस्थापितको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा भने जम्मा तीनजना मात्रै दलित निर्वाचित भए । पहाडमा पाँच जाति र मधेसमा २६ जाति दलित समुदायमा पर्छन् । तिनको समानुपातिक समावेशीकरण दलित आन्दोलनले उठाउनुपर्ने सवाल हो ।
त्यतिमात्रै होइन, आरक्षण डाक्टर पढ्न, सरकारी जागिर खान, उच्च शिक्षा र राजनीतिक नियुक्तिमा मात्रै होइन, वादी, गन्धर्व र मधेसका मुसहर हलखोर, डोम, खत्वेलगायतका दलित समुदायको रासन, वस्त्र, शिक्षा, आवास, पौष्टिक आहारमा सुविधा र सहुलियतका निम्ति पनि सवाल उठाउन जरुरी छ ।
वादी जाति आजपर्यन्त देह व्यापार गर्न, मागेर खान बाध्य छन् । काठमाडौंमा सञ्चालित तारे होटेलमा हुने गोष्ठी, छलफल र मन्त्रीद्वारा उद्घाटन हुने विकासे कार्यक्रमको उपयोगिता कहाँ छ ?
राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे मात्रै अन्य अधिकारको प्राप्ति सम्भव छ । तसर्थ कुनै ब्राह्मण क्षेत्रीको झोले बालीघरे भ्रातृ संगठन या एनजीओ नभई स्वतन्त्र दलित मुक्ति संगठन निर्माण गर्न ढिलाइ हुँदैछ । कम्युनिस्ट जार्गन, भाषा र आश्वासन होइन, लोकतान्त्रिक विधि र चरित्र भएको असल नेतृत्वकर्ताद्वारा मुक्ति आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने जरुरी र बाध्यता दुवै छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, समुदायको हित गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विश्वास जित्न सक्ने संगठन निर्माण निम्ति दलित समुदाय अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा नयाँ अम्बेडकरको खाँचो खटकिएको अवस्था छ । त्यसको पूर्ति गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
चैत २३ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री ओलीको ...
दियो सन्दिपलाई दिल्लीले १ नम्बरको जर्सी